भिडियोको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्: https://youtu.be/LSzEZ6wl6lc
इनरुवा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले इनरुवाको मेयरको टुङ्गो लगाएको छ ।इनरुवा नगर कार्य समिति सुनसरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मेयरका रुपमा पार्टीको तर्फबाट दिलीपचन साहुलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिएको जनाएको छ । जसपा इनरुवा नगर कार्य समितिका अध्यक्ष गुलाब शर्माले पत्रकार सम्मेलनका बिच साहुलाई मेयर पदको उम्मेदवारका रुपमा चयन गरिएको जानकारी गराएका हुन । नगर अध्यक्ष शर्माले चैत्र १२ गते जिल्...
मेरो वडा मेरो सान वडा, ३ इनरुवाको पहिचान (भिडियो रिपोर्ट) https://youtu.be/QFJJB7emgu4
बुधबार, फाल्गुण २५, २०७८
जिल्ला सुसनरी भोक्राहा नरसिहं गा.पा ३ र ६ को सिमाना खुनिया पुल स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्ग सडकखण्डमा पुर्व बाट पश्चिम तर्फ आउदै गरेको ना.८.ख ८४९३ नं को बस र बिपरित दिशा बाट जादै गरेको ना ५ ख २९९६ नं को ट्रक एक आपसमा ठक्कर खादा निम्न मानिसहरु घाईते भई उपचारको लागी जिल्ला अस्पताल ईनरुवा पठाईएको छ। उक्त आगलागी भएको सवारी साधनमा ३ जना जली मृत्यु भएको हो। निम्न घाईतेहरु:- १) जिल्ला बारा निजगढ ९ बस्ने...
बलिउडका मेकरले चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरेसँगै धमाधम प्रचार पनि सुरु गरेका छन् । बलिउड नायक जोन अब्राहमको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘सत्यमेव जयते २’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । निर्देशक मिलाप झावेरीको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा नायक जोन ट्रिपल भूमिकामा देखिएका छन् । यो चलचित्रमा उनको नाम सत्या, जय र दादा साहब आजाद छ । भारतलाई भ्रष्टचार मुक्त गर्ने सपना बोकेका आफ्ना पिताको योजना पुर...
गरे के हुन्न ? १४ वर्ष युरोपका विभिन्न देशमा बसेका सुरज गिरी पिआर कार्ड त्यागेर नेपाल मै रिसोर्ट संचालन गरेका छन । बिदेशी भुमीमा गरेको श्रम र अनुभवबाट गिरीले स्वदेशी भुमीलाई नै उर्वर बनाउन खोज्दै छन। कोशी गाउँपालीका वडा नं. ३ मा रहेको कोशी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा गिरीले सञ्चालन गरेको उक्त रिसोर्टमा १५ जनाले रोजगारी पाएको अवस्था छ। कोरोना केही सुस्ताएको बेला रिसोर्टमा आन्तरिक र बाहिरिय पर्यटकक...
इटहरी/ नेपाली साङितिक क्षेत्रमा गीतकारको रुपमा उदाउदै गएका गीतकार हुन रोहित घिमिरे । उनले हरेक बर्ष जसो आफ्नो शव्दमा गीत सार्बजनिक गर्दै आएका छन् । बिशेषगरी वियोगान्त तथा प्रेम बिछोडका गीत लेखनमा माहिर घिमिरेको पुन: आफ्नो शब्दमा गीत सार्बजनिक भएको छ । उनको शब्दमा रहेको ‘भन्देउ हजुर’ बोलको गीतको भिडियो सार्बजनिक गरिएको हो । बुधबार युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको गीतमा प्रतिमा केसि र राग पौडेलको आवाज ...
इटहरी । लेखक/गायक श्री कृष्ण लुइँटेल (बोके दारी) काे नयाँ गित ‘तिम्रै हुँ म (साली कमला २) सार्वजानिक भएकाे छ । बि.सं २०62 सालमा सार्वजानिक भएकाे चर्चित गीत साली कमलाकाे अपार सफलता पश्चात गायक लुइँटेलले पुन ‘साली कमला २’ आफ्नै यूट्रयुव च्यालन बोके दारी अफिसियल मार्फत सार्वजानिक गरेका हुन् । संगीत/गायन/शब्द बोकेदरी एबम श्री कृष्ण लुइँटेलले गरका छन् भने गीतको एरेज्न जाेनी याेन्जनकाे रहेकाे छ । केश...
शुक्रबार, भाद्र १८, २०७८
देवानगन्ज ६ मा जसपा प्यानल विजयी